Phupha NgoTata Oswelekileyo | Ephila, Encumile kwaye Elila
kuqala » Amaphupha » Phupha ngotata oswelekileyo
Phupha ngotata oswelekileyo
Phupha ngotata oswelekileyo linokuba neentsingiselo ezininzi ezahlukahlukeneyo, ngakumbi ukuba ukufa bekusandul’ ukwenzeka.
Abantu abaninzi bakholelwa ukuba amaphupha adlulisela iimvakalelo zethu kunye noloyiko ngendlela efihlakeleyo, kodwa kukho ezinye iingcamango malunga nabo.
Enye kukuba abantu esibathandayo basebenzisa amaphupha ukuzama ukunxibelelana nathi.
Maxa wambi basebenzisa le ndlela yokunxibelelana ukuze bazole, bacele uncedo kuthi okanye baphoswe kukuba secaleni kwethu.
Ezi ntsingiselo zibangela umdla kubantu abaninzi, kodwa siza kuzicacisa kweli nqaku.
Siza kubonisa intsingiselo “eqhelekileyo” yokuphupha ubawo ofileyo kunye nentsingiselo “engaqondakaliyo,” oko kukuthi, ukunxibelelana nabafi.
Ukuba ukholelwa ukuba lowo umthandayo uzama ukunxibelelana nawe, unokuqiniseka ukuba uya kuyifumana impendulo kweli nqaku.
Sikubonisa intsingiselo eqhelekileyo yamaphupha nentsingiselo engaqondakaliyo kwabo bakholelwa ukuba abafi basenokuzama ukunxibelelana nathi ngamaphupha.
Ndikholelwe, awuyi kuyifumana ingcaciso efana nale kwenye indawo.
Jonga yonke into ofuna ukuyazi apha ngezantsi!
Kuthetha ukuthini ukuphupha utata ongasekhoyo
Ngaphambi kokuba ndikuxelele ngokuqinisekileyo ukuba yintoni intsingiselo yephupha lakho, kufuneka ukhumbule iinkcukacha zalo.
Eli phupha liqheleke kakhulu...
Akunakwenzeka ukuba kuqondwe intsingiselo yalo ngale ndlela ngaphandle kokwazi ukuba uyise wenza ntoni...
Ngaba uyihlo wayephila ephupheni? Ubuncumile? Ukulila? Okanye ebethetha nawe nje?
Ukuba unokukhumbula ezi nkcukacha, kulula ukuyibona intsingiselo.
Sizibeke apha ngezantsi, jonga yonke into oyifunayo ngoku!
Ukuphupha utata osele wasweleka ephila
Eli phupha lelinye lawona axhaphakileyo abantu ababa nawo xa befelwe ngabantu ababathandayo.
Eli phupha alidityaniswanga nawo nawuphi na umyalezo umntu omthandayo afuna ukukuxelela wona, lithetha into enye kuphela… Ukhumbule!
Ngapha koko, awuzange udlule ekufeni kukayihlo kwaye oko kukushiya unomnqweno omkhulu ngaphakathi esifubeni sakho.
Ezi zinqweno zidala iingcinga eziphindaphindiweyo ngaphakathi kwentloko yakho ezingenakwenzeka ukulawula kwaye zibonakaliswa ngamaphupha.
Ukuphupha utata osele wasweleka ephila nako kudlulisela umothuko omncinci oshiye entloko yakho.
Sukuba nexhala, kuqhelekile ngokupheleleyo ukwenza umonzakalo wentloko ngamaxesha anzima, ngakumbi ngokusweleka.
Singacebisa kuphela ukuba uzame ukoyisa konke oku.
Ungalibali kuba siyazi ukuba akunakwenzeka ngokupheleleyo, zama ukuqhubela phambili kwaye ucinge ukuba uyihlo ukwindawo engcono ngoku.
Sonke siphela ngokufa, kwenzeka nje ngamaxesha ahlukeneyo kuthi sonke, khumbula ukuba esi sisiganeko sendalo ebomini.
Ukuba uyihlo uyancuma ephupheni, intsingiselo itshintsha ngokupheleleyo… Masiqhubeke nokucacisa…
Ukuphupha utata osele eswelekile encumile
Zimbini iinkcazo ezinokubakho apha!
Enye yazo yayiphathelele intsingiselo yamaphupha ize enye inxibelelene nokusebenzelana nemimoya nesigidimi esivela kwabafileyo esiya kwabaphilayo.
Masiqale ngentsingiselo eqhelekileyo yamaphupha.
Ukuphupha utata osele efile encumile kuthetha ukuba izinto ezintle ziyakwenzeka ebomini bakho.
Uncumo yinto entle, into entle eyenzeka kuphela xa kukho izinto ezintle kwaye emaphupheni ithetha loo nto kanye.
Kuya kubakho utshintsho ebomini bakho oluya kuba luhle kakhulu kwaye luyakwenza wonwabe kakhulu.
Akunakwenzeka ukucacisa ukuba olu tshintsho luya kuba yintoni, kunokwenzeka kuphela ukwazi ukuba baya kuba bahle kwaye eli phupha libubungqina baloo nto.
Le yenye yeentsingiselo, kodwa kukho abo bakholelwa kwithiyori eyahluke ngokupheleleyo!
Kukho abakholelwa ukuba ukuphupha utata osele efile encumile kuthetha lo nto utata uzama ukudlulisa umyalezo ebantwaneni.
Lo myalezo unxulumene nentlalo-ntle kwaye ngokuqhelekileyo kwenzeka xa abantwana bengayeki ukucinga ngabazali babo abangasekhoyo.
Kule meko kuthetha ukuba utata wakho uzama ukukuxelela ukuba yonke into ihamba kakuhle kuye, ukuba ulungile apho akhoyo kwaye kufuneka ayeke kunye naye ngosizi.
Xa umkhumbulayo, musa ukukukhumbula nje ukufa kwakhe, khumbula amaxesha amnandi awawachitha ecaleni kwakhe.
Utatakho ukuxelela ukuba uyaphila kwaye wonwabile.
Zola, wamkele ukuhamba kwakhe kwaye ukholelwe ukuba ulungile, kuphela emva koko uya kukwazi ukuqhubeka uphila ubomi bakho obonwabisayo.
Phupha ngotata osweleke elila
Eli lelinye lawona maphupha ahlabayo awoyikisa abantu kakhulu kwaye linokuba neentsingiselo ezimbini ezahlukeneyo.
Enye yezi ntsingiselo zinxulunyaniswa nehlabathi lamaphupha kunye nenye enxibelelene nehlabathi labafileyo.
Phupha ngotata owasweleka elila luphawu lokuba kuya kubakho ukubuyela umva okungalunganga ebomini bakho.
Oku kubuyisela umva kunokuba yingxaki enkulu eya kukwenza ubandezeleke.
Ukubona utatakho elila kuthetha ukubandezeleka azokukuva ngezi ngxaki.
Qaphela ukuba eli phupha alithethi ukuba le nto iya kuhambelana noyihlo okanye ukufa kwakhe.
Njengoko kwiphupha elingaphambili, akunakwenzeka ukucacisa ukuba yeyiphi isiganeko esibi esiya kuba.
Singacebisa kuphela ukuba uhlale womelele ukujongana nayo yonke le mingeni.
Le yenye yeentsingiselo...
Ukuphupha utata osele eswelekile ekhala kungathetha enye into...
Kukho abo bakholelwa ukuba oku kuthetha ukuba utata wakho uzama ukudlulisela ukungonwabi ebomini bakho.
Ngokuqhelekileyo utata wakho usenokuba uyakhala emaphupheni ngenxa yelishwa lakhe lokumbona ehamba.
Xa unyana edakumbile, noyise uba buhlungu ngenxa yokubandezeleka kwakhe.
Xa kunjalo uyihlo ubona usezintlungwini kwaye umkrazula ngokupheleleyo.
Le ntsingiselo iyavakala kubantu abaninzi kwaye kukho abo bakholelwa ngokwenene kuyo.
Ukuba uyakholelwa oku, ungazama kuphela ukuphucula ubomi bakho kwaye uzame ukonwaba ngaphandle kobukho bukayihlo.
Khumbula ukuba ukuphupha utata osele efile ekhala luphawu olubi, kodwa ungayisebenzisa kakuhle.
Yisebenzise ukuphucula ubomi bakho, wonwabe kwakhona, nokuba kukho okanye ngaphandle kobukho bomntu omthandayo.
Uyihlo ufuna wonwabe, kanye.
Ukuphupha utata osele ebhubhile kwakhona
Eli lelinye lamaphupha anentsingiselo enye kwaye kulula ngendlela emangalisayo ukucacisa.
Inxulunyaniswa nokwenzakala okukhulu kwentloko yakho.
Le trauma ibangelwe kukusweleka kukatatakho kwaye awukagqibi kuyo.
Ngokusisiseko, ukuphupha utata osele eswelekile esifa kwakhona kuthetha ukuba akakayifumani into yokufa kukayise kwaye mhlawumbi akanakukwazi ukuyiphelisa nanini na kungekudala.
Ukufa yinto enzima kakhulu ukujongana nayo, ngakumbi kumzali, kwaye unengxaki kuyo.
Akunakwenzeka ukulawula okanye ukuyeka la maphupha ngokuzithandela.
Kusele kuwe ukuba uphile ubomi bakho kwaye uzame ukoyisa yonke into ekubambezelayo.
Kuphela kulapho uya kukwazi ukuyeka ukuba neli phupha kwaye wonwabe ngokwenene.
Ukuphupha utata osele eswelekile esifa kwakhona kubuhlungu, ukuba ufuna uncedo kulo mba, sincoma ukuba uthandaze uhlobo oluthile lomthandazo kwibhlog yethu, inokuba yindlela yokukunceda.
Ngaba ukuphupha utata ongasekhoyo kubi ngokwenene?
Ngaba la maphupha amabi ngokwenene?
Ngaba ibonisa ukuba awuyi kuvuya kakhulu? Okanye ngaba ziingozi nje ezingenantsingiselo kubomi bethu?
Njengoko usenokuba sele ubonile, iphupha ngalinye liphupha yaye ngalinye linentsingiselo eyahlukileyo ngokupheleleyo.
Ngokuqhelekileyo eli phupha alibi libi, lithetha nje ukuba ucinga kakhulu ngokufa kukatata wakho kwaye awukagqibi.
Ekuphela kwento embi enokuza emva kwakhe kukwenzakala okungenakuphola.
Hlalutya zonke iinkcukacha zephupha lakho kwaye ujonge iintsingiselo ezifanelekileyo kweli nqaku.
Yenza esikucebisayo kwaye uzame ukoyisa oku kufa kube kanye.
Ubani akanakuze alibale ukuba ukufa kuyinto eqhelekileyo ebomini yaye akukho mntu unokukulawula.
Phupha ngomyeni osele eswelekile
Phupha ngotata oswelekileyo inokuba namawaka eentsingiselo ezahlukeneyo.
Ngoku kukuwe ukuba uvavanye zonke iinkcukacha zeli phupha kunye nento omawuyenze ukuze uziphelise kube kanye.
Ukuba kukho naliphi na iphupha oye waba nalo elingekho kweli nqaku, unganqikazi ukuphawula.
Ndiya kuvuya kakhulu ukuchaza oko kuthetha ntoni ngokukhawuleza!
1 Kuthetha ukuthini ukuphupha utata ongasekhoyo
1.1 Ukuphupha utata osele wasweleka ephila
1.2 Ukuphupha utata osele eswelekile encumile
1.3 Phupha ngotata osweleke elila
1.4 Ukuphupha utata osele ebhubhile kwakhona
2 Ngaba ukuphupha utata ongasekhoyo kubi ngokwenene?
Nge-19 ka-Agasti ka-2018, 1: 24 pm
Ndiphupha phantse qho ebusuku ngotata wam ongasekhoyo ehlala ephila ephupheni esithi akabhubhanga uhleli endiqumbele, ephupheni andifuni ukuyamkela into yokuba uyaphila ithetha ukuthi?
NgoSeptemba 14, 2018, 12: 42 am
Ndihlala ndiphupha utata wam ongasekhoyo esaphila.
Uhlala egula esibhedlele okanye egula, ehlala estratweni, andizange ndimphuphe esendlini ebehlala kuyo. Iphupha lokugqibela ebehlala kulo kwaye emdaka kakhulu ediniwe kodwa engafuni kulala.
NgoNovemba 20, 2018, 8: 37 pm
Ndiphuphe utata wam owaswelekayo endicela ukuba ndincede umtshana wam wabe emhle ngeyona ndlela emxelela lonto ndabe ndimazi ukuba uswelekile wabe nomama endincokolela encedisa umtshana ndasuka ndalila emva koko ndalila. Ndajonga ecaleni ndavuka ephupheni kwaye kwakusebusuku kodwa ndihlala ndiphupha abantu abaswelekileyo bendinika umyalezo okanye becela uncedo….
NgoSeptemba 20, 2018, 3: 31 pm
Onke amaphupha am utata wam osele engasekho (ubomi obuthandwayo) wasweleka ngenxa yokuswela unyango olululo. Bazalisa amayeza kodwa abazange babe nengxaki efanelekileyo, ndiyazi indlela awayebuthanda ngayo ubomi. Kwaye nanini na xa ndiphupha ngaye, uyacaphuka, ekhala, enkqonkqoza etafileni aze andijonge kwaye athi: akulunganga, oko kwakungenakwenzeka. Onke amaphupha abaleka into embi. Noko ke, izolo ndimphuphe ekhala nje. Andilikhumbuli elaphupha kodwa wayelila. Kunokuthetha ntoni oku?
Nge-2 ka-Okthobha 2018, 6: 17 am
Ndiphuphe utata wam owasweleka 3 months ago. Bendimxelela ukuba ubhubhile kwaye ukusabela kwakhe kukukhala ngathi akamazi ukuba ubhubhile.
Nge-4 ka-Okthobha 2018, 12: 39 pm
abazali bam baswelekile, ndibaphuphe bephila bobabini utata wam wabetha umama weza kum ecela uncedo?
NgoNovemba 11, 2018, 10: 21 am
Ndicela ukwazi ukuba kuthetha ukuthini ukuphupha ndisamkela iintyatyambo kutata sele eswelekile ephupheni efika endinika iintyatyambo ezinomqheba omde kakhulu nezintle ezibomvu kodwa uyandigona akathethi.
NgoNovemba 19, 2018, 9: 56 am
Ndiphuphe utatam lo ungasekhoyo ephupheni bendimbona nangona bendimazi ukuba uswelekile ndibona ngathi ngumbono. Kwakungekho mntu umbonayo ephupheni qha ndambona ndade ndakwazi nokumbamba. Nto leyo enokuthi ndikwazi ukumbona utata noba sele efile ingathi ndiyawubona umoya wakhe phakathi kwethu. Wayezolile, ngokunzulu. Nempahla eqhelekileyo. Kodwa wayesazi ukuba ngumoya wakhe awayewubona nasemva kokufa kwakhe.
USabrina Saviti Silva
NgoNovemba 20, 2018, 8: 32 pm
Ndiphuphe utata wam owaswelekayo endicela ukuba ndincede umtshana wam wabe emhle kakhulu esithi kuye ndimazi ukuba uswelekile ungumama wesikhululo ethetha nam mandincede umtshana wam ndiqale ndilile emva koko. Ndajonga ecaleni ndavuka ephupheni kwabe kusebusuku kodwa ndihlala ndiphupha abantu abangasekhoyo bendinika umyalezo okanye ndicela uncedo.
NgoFebruwari 9, 2019, 11: 06 pm
Utata wasweleka 4 months ago, ndiphuphe sihlala kwindlu esasihlala kuyo ndineminyaka eyi 18 kukho iflat elapha entla kwendlu yam kungekho mnyango inkulu nje onokuthi unyuke ndakhwela kuyo. ndakhwela ndayifumana indlu intle kakhulu bendimane ndisithi ndizomxelela utata ukuba ndifuna ukuhlala khona kodwa ndingene ekamereni ndibone abantu abangasekhoyo ndibaleke ndehlika wabe utata efika. ndithi mandithule ngoba bazondimamela
Ngomhla wama-10 kuMatshi 2019, 6: 07 am
Ndiphuphe utata ephupheni ephila endifihlela kuba ebethanda ukwenza lanto yokundoyikisa esaphila xa ndimbhaqile wonzakele ngenye inxeba endingazange ndilichonge ndazama ngamandla ukulifumana inxeba. ukucoca nokumhoya wayenza ezolile ngalo lonke ixesha endixelela ukuba yonke into ilungile naye yonke into izolunga then ndamxelela ukuba ndimthanda kakhulu wathi uyayazi ukuba andidingi Ixhala lokuba ubomi buzondilimaza kakhulu nangoku uthetha ukuthini???
Ngomhla wama-24 kuMatshi 2019, 10: 31 am
Ndiphuphe utatam engafanga kodwa ebuhlungu kakhulu emlenzeni wakhe. Ndaye ndambuza ukuba kutheni engazange avele ngaphambili esazi ukuba usapho luthwaxwa kukusweleka kwakhe kwaye nalapho wayelahlekile iminyaka emithathu.
Nge-2 ka-Epreli 2019, 2: 09 pm
Ndahoya umakhulu wam iinyanga ezimbalwa kwaye kwakumnandi kuthi sobabini. Wasweleka kwaye ndandinaye… Ndamthandazela ukuba abe noxolo. Yayibuhlungu kwaye intle. Ndaqala ukuphupha ngaye yonke imihla, iinyanga, zingamaphupha amahle ehamba ngokonwaba kwindawo entle. Sade saya kufuna icawa yemimoya esasihlala sisiya kuyo… emva koko yanxibelelana nathi. Ulityhilile igama lakhe kwaye wasithumelela umyalezo, ukusukela ngoko amaphupha ehlile kwaye ndiziva ngathi uphilile.
Nge-2 ka-Epreli 2019, 2: 23 pm
Utata wasweleka nge 18/07/2018. Ndiphuphe kakhulu kwaye ndakhumbula, ukususela ngoko andizange ndiphinde ndiphuphe. Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo ndaqala ukuphupha kancinci kakhulu kwakhona. Namhlanje ndiphuphe ndidlula kwindawo enodaka, kufuneka ndizilinganise, ndingawi, kuba amacala ayefana nemisele enzulu. Bekukho iintyatyambo eziwileyo kwivaskom ndayozilungisa. Kwakukho iziqhamo kunye neesaladi. Inoba ndihlala ndilicoca ingcwaba lakhe. Ngephanyazo utata wayekwibhedi yelitye wavuka…uthe wozela kakhulu, sele efuna ulala kwakhona. Sincokole nje kancinci wabe esithi uphilile wancokola ngendawo ndamxelela nje kancinci wabe engenamandla esozela. Ujike ngecala wandibamba iqakala... uye wabiwa bubuthongo ndabe ndilila luvuyo loba ethethe nam ndibuhlungu ukuba makaphinde ahambe. Ndabuza enoba abantu banokumbona na, kodwa kwakungekho mntu wayenokumbona ngaphandle kwam. Yayivakala iyinyani, ndavuka kodwa kwakungathi ndivukile… ndeva ngathi kukho into ebambe iqatha lam. Ndalila ndibulela uThixo ngokuvumela utata ukuba afike ephupheni lam, ndambulela nangokuza kwakhe. Ndikukhumbula kakhulu.